हाम्रो कक्षाहरू बारे | शरणार्थी र आप्रवासी लागि निःशुल्क अनलाइन कक्षाहरू
हाम्रो कक्षाहरू बारे
आज आफ्नो पहिलो वर्ग सुरु!
तपाईंको GED पास® परीक्षा / HiSet ™ परीक्षा
आफ्नो उपाधि प्राप्त
आफ्नो काम गर्ने मौका वृद्धि
जो विषय तपाईं सुरु गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईंको GED लागि अध्ययन® प्रमाण अनलाइन र आफ्नो काम अवसर सुधार.
4 units, 80 पाठ
अमेरिका बारे जान्नुहोस्
आफ्नो शास्त्र परीक्षा पार
एक नागरिक बन्न!
GED® अभ्यास परीक्षण
एक GED लिन® को GED मा शीर्षकहरू आधारित अभ्यास परीक्षण® परीक्षण. तपाईंको GED पास® परीक्षण!
अमेरिकी नागरिकता अभ्यास परीक्षण
यो नागरिकता अभ्यास परीक्षण संग आफ्नो अमेरिकी नागरिकता परीक्षण को लागि अध्ययन. तपाईं वास्तविक परीक्षण समयमा सोधे सकिन्छ कि प्रश्नहरूको जवाफ अभ्यास.
RCO कक्षाहरू मुक्त छन् र शरणार्थी र आप्रवासी लागि गरियो.
तपाईं कुनै पनि समयमा हाम्रो कक्षाहरू लाग्न सक्छ, कहीं.
हाम्रो कक्षाहरू लिएर तपाईंलाई मदत गर्नेछ
क्यारियर कौशल पाउन
म जान्न के चाहियो?
तपाईं सुरू गर्न मद्दत गर्न थप जानकारी
कसरी अनलाइन कक्षाहरू काम?
हाम्रो कक्षाहरू अनलाइन कारण, तपाईं कुनै पनि समयमा तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ, कहीं. तपाईं एक स्कूल जाने छैन. बरु, घरमा वा तपाईँको फोन मा तपाईं सिक्न सक्छौं. ईACH वर्ग धेरै पाठ समावेश. पाठ कवर जानकारी तपाईं आफ्नो नागरिकता वा GED वा HiSET परीक्षण पारित गर्न जान्नु आवश्यक छ. प्रत्येक पाठ तपाईं आफ्नो समझ परीक्षण गर्न सक्छ भनेर अन्त मा एक प्रतियोगिता छ. तपाईं जस्तै धेरै पल्ट पाठ पढ्न र रूपमा क्विजहरू लाग्न सक्छ. पनि, तपाईं प्रश्न छ भने तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. हामी यहाँ तपाईं सफल मद्दत गर्न तयार छौं!
कसरी म एक वर्ग सुरु गर्छन्?
कृपया चयन माथि "दर्ता" वा प्रत्येक पाठ्यक्रम द्वारा "साइन अप" बटन को एक. त्यसपछि आफ्नो नाम र अन्य जानकारी दर्ता. अर्को तपाईं आफ्नो पाठ्यक्रम लागि परिचय पृष्ठ जानेछन्. परिचय पृष्ठ तपाईं आफ्नो पाठ्यक्रम बारेमा थप भन्नेछु. यो पाठ सूची हुनेछ. पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न सजिलो छ. एक पटक तपाईं सुरू, प्रत्येक पाठ अघि एक देखि मा आउने.
म मेरो आफ्नै भाषामा पाठ्यक्रम लाग्न सक्छ?
हो. हाम्रो पाठ्यक्रम धेरै भाषामा अनुवाद छन्. अनुसन्धान यसलाई आफ्नो दुवै मूल भाषा र अंग्रेजी मा सिक्न राम्रो छ देखाउँछ. यो तपाईं राम्रो सिक्न मदत र आफ्नो अंग्रेजी सुधार हुनेछ.
को कक्षाहरू मलाई कुनै पनि प्रमाणीकरण दिनेछु?
यो कक्षाहरू तपाईं एक प्रमाणीकरण दिन छैन. बरु, तिनीहरूले तपाईंलाई नागरिकता वा उच्च विद्यालय उपाधि दिनुहुनेछ भनेर परीक्षण पास गर्न तयार.
को कक्षाहरू कसरी लामो पूरा गर्न लिन गर्छन्?
यी पाठ्यक्रम काम मान्छे को लागि गरियो, आमाबाबुले, र व्यस्त जीवन अरूलाई. यसलाई आफ्नो अवस्था निर्भर, शिक्षा, र भाषा कौशल. जो तपाईंको क्षमता, तपाईंले चाँडै वा बिस्तारै तपाईँले चयन रूपमा जान सक्नुहुन्छ. केही विद्यार्थीहरू धेरै द्रुत कक्षाहरू पूरा, एक दिन मा धेरै पाठ खत्म. अन्य विद्यार्थीहरूको समय लाग्न र धेरै महिना भन्दा बढी सिक्न.